SAWIRO:-Qatar Airways oo si rasmi ah duulimaad uga bilaawday Muqdisho – XAMAR POST
SAWIRO:-Qatar Airways oo si rasmi ah duulimaad uga bilaawday Muqdisho
By Zakariye iiman On Jul 1, 2019
Shirkadda Diyaaradaha Qatar Airways ayaa Maanta sirasmi ah Magalada Muqdisho uga bilaawday duulimaadyo toos ah,iyada oo mid ka mid ah diyaaradaha Shirkadaas ay kasoo degatay Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magaalada muqdisho.
Munaasabad lagu daahfurayay duulimaadka tooska ah ee Shirkadda Qatar Airways ka bilaawday Muqdisho ayaa lagu qabtay Garoonka Aadan-Cadde,waxaana ka qeyb galay , wasiirka Arrimaha Dibada Somalia,Xubno kale oo ka tirsan Dowladda, danjiraha dowlada Qatar u fadhiya Somalia iyo masuuliyiin kale.
Shirkadda Diyaaradaha Qatar Airways ayaa rakaabkii ugu horeeyay keentay Magalada Muqdisho,kuwaas oo isugu jira Soomaali iyo Ajaanib, iyada oo rakaab kale ka qaadeysa Magalada Muqdisho.
Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda ayaa waxaa ay sheegeen in duulimaadyada Shirkadda Diyaaradaha Qatar Airways ay marinkiisa noqon doonaan Muqdisho, Doha, Doha Mqudisho, iyada oo todobaadkii Muqdisho imaan doonto ilaa Saddex jeer.
Shirkadda Diyaaradaha Qatar Airways ayaa ah shirkadii afaraad ee duulimaad Heer Caalmai ah ka bilaawdo muqdisho,waxaana horay uga bilaabay Shirkadaha kala ah Ethiopian Airlines, Turkish Airlines iyo Air Djbouti.